Samsung Galaxy Fold: iFixit manyere ịdọrọ isiokwu ya | Gam akporosis
Samsung na-eme ka iFixit kwụsị iwepu ya na Samsung Galaxy Fold
Ihe anaghị aga nke ọma Samsung n’oge na-adịbeghị anya. A ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọrụ nwere ohere gị mpịachi ihuenyo ekwentị na-akọkwara nsogbu panel, nke ejedebe na-agbaji ma ọ bụ na nsogbu. Ọbụna ụmụ okorobịa na iFixit, ndị ọkachamara na-agbagha ọdụ, nwere ohere ịnweta Samsung Galaxy Fold y gosiri ihe mere gị na ihuenyo etịbede.
Mana ọ dị ka ndị ụlọ ọrụ Korea enwebeghị obi anụrị na nyocha ha banyere ọdụ ahụ ma ha rịọrọ ha ka ha wepu disassembly nke ọdụ a. Mba, ha emebeghị ya ozugbo, mana ha jụrụ onye na-ere ahịa nke na-enye igwe na ndị otu iFixit ekwentị, anyị niile makwaara ihe ga-eme ma ọ bụrụ na ha ajụ.
Ee, Samsung amanyela iFixit iji wepu edemede banyere Samsung Galaxy Fold
Oghere iFixit na-ebuputa ngwongwo nke ọdụ niile a na-etinye n'ihu ha na ebumnuche na ndị ọrụ maara otu esi edozi ha ma ọ bụrụ na ịta ahụhụ ụdị nsogbu ọ bụla. N'ụzọ dị otú a, ha na-enye ohere nke idozi ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba nkume na-enweghị iburu ya na ọrụ ọrụ aka. Mana na nke a, opekata mpe ugbu a, ọ bụrụ na ịzụta Samsung Galaxy Fold, ị gaghị ama etu esi mezie ya.
Kedu ihe Samsung chọrọ ịgbanwe na Galaxy Fold?
Site na nkwupụta na weebụsaịtị ya, ndị otu iFixit ziputara ihe ndị a:Otu onye anyị tụkwasịrị obi nyere anyị mpaghara Galaxy Fold anyị. Samsung arịọwo, site na onye mmekọ ahụ, na iFixit wepụ iwepụ ya. Anaghị achọrọ anyị wepu nyocha anyị, iwu ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ. Mana n'ihi nkwanye ugwu maka onye a, onye anyị na-ahụ dị ka onye enyemaka iji mee ka ngwaọrụ rụọ ọrụ, anyị na-ahọrọ ịwepụ akụkọ anyị ruo mgbe anyị nwere ike ịzụta Galaxy Fold a na-ere ahịa. "
Yabụ: Samsung ga-egwu iFixit tụkwasịrị obi na-ere ahịa, na Portal ahọrọla iwepu usoro nke Samsung Galaxy n'ogige atụrụ teardown ka o wee ghara imerụ onye òtù ọlụlụ ya aka nwere ike machibidoro ya Samsung. Ọ bụ eziokwu na onye na-emepụta Korea amatala njehie na njedebe ya, ruo n'ókè nke iyigharị mmalite nke ọnụMana ọ bụ eziokwu doro anya na mmegharị ọhụụ a agaghị abara ihe oyiyi ahụ uru ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Samsung na-eme ka iFixit kwụsị iwepu ya na Samsung Galaxy Fold
Otu n'ime ndị isi ya kwupụtara ọkwa Xiaomi na Snapdragon 730
Etu esi eji amamọkwa nkeonwe na WhatsApp